Iyini i-Polyvinyl chloride futhi isetshenziselwani?
I-Polyvinyl Chloride (i-PVC) iyi-polymer eyakhiwe ngokwakhiwa kwe-thermoplastic kanye nepulasitiki yokwenziwa yesithathu ekhiqizwa kakhulu kunazo zonke. Lokhu kwaziswa kwethulwa okokuqala emakethe ngo-1872, futhi kunomlando omude wempumelelo ezinhlelweni eziningi. I-PVC ivela ezinhlotsheni eziningi, kufaka phakathi imboni yezicathulo, c ...
Ngabe amaGumboots enziwe ngani?
Uma ngabe ufike kuleli khasi, mhlawumbe ujwayele ukuthi ayini ama-gumboots kanye nesidingo sekhwalithi ephezulu, amabhuzu angenawo amanzi. Kepha, umile ukuze ucabange, enziwa ngani amabhuzu emvula? Yebo, amabhuzu amaningi angenawo amanzi enziwa ngenjoloba yemvelo noma i-polyvinyl chlor ...
Izinzuzo Eziyisi-4 Zokusebenzisa i-PVC Emkhakheni Wokukhiqiza Izicathulo
Umhlaba wokuklanywa kwezicathulo nokukhiqizwa usuthuthuke kakhulu eminyakeni engamakhulu amabili edlule. Sezidlulile izinsuku zokuba nomkhiki osebenza ngezindwangu osebenzela idolobha lonke. Ukuthuthuka kwezimboni kulethe izinguquko eziningi, kusuka ekutheni izicathulo zenziwa kanjani kusel ...
Izinto ezifanelekayo zeFOOTWEAR Industrial
Imboni yezicathulo idinga izinto ezinokumelana okuphezulu kwemishini, ukusebenza kahle ekucubunguleni, emisha nasekubonakaleni okuphezulu. Amakhemikhali e-PVC enzelwe ukuhlangabezana nalezi zidingo. Ukwakheka kwamakhemikhali e-PVC kufana n ...
Isikhathi sokuqala lapho i-PVC yatholwa khona ngengozi ngo-1872 ngu-chemist waseJalimane, u-Eugen Baumann. Yayihlanganiswa njengebhodlela le-vinyl chloride elalishiyelwe elangeni lapho lifolisha khona. Ngasekupheleni kweminyaka yama-1800 iqembu le ...